musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » Universal Beijing Resort yakavhurika kune veruzhinji nhasi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • tsika nemagariro • Entertainment • mafirimu • Hospitality Industry • Investments • nhau • vanhu • Resorts • Theme Parks • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Sechirongwa chikuru chekudyara kwekunze kwenyika muindastiri yebasa muBeijing, nzvimbo yekutandarira inotarisirwa kusimudzira kugadzwa kweBeijing senzvimbo yekudyiwa yepasi rose nekusimbisa chivimbo cheChina tsika nemagariro ezvekushanya pakati pehosha yeCOVID-19.
Universal Beijing Resort, parizvino iri hombe pachiyero pasirese, yakavhurwa veruzhinji neMuvhuro.
Iyo nzvimbo yekutandarira, inovhara makiromita mana emakiromita, inosanganisira inofungidzirwa zvakanyanya Universal Studios Beijing theme park, iyo Universal CityWalk, uye maviri mahotera.
Kune makumi matatu nematanhatu ekuvaraidza uye anokwezva anoyevedza, pamwe nemakumi maviri nenomwe evaraidzo.
Worlds hombe Universal Resort yakavhurwa veruzhinji neMuvhuro muBeijing muTongzhou Dunhu, panogara Beijing Municipal Administrative Center.
Iyo Universal Beijing Resort, parizvino iri hombe pachiyero pasirese, ndiyo yechishanu Universal Studios theme park pasirese, yechitatu muAsia, uye yekutanga kuChina.
Iyo nzvimbo yekutandarira, inovhara makiromita mana emakiromita, inosanganisira inofungidzirwa zvakanyanya Universal Studios Beijing theme park, iyo Universal CityWalk, uye maviri mahotera. Ino vimbisa kupa vashanyi ruzivo rwekushanya rwakadzika, iine nyika nomwe dzine zvivaraidzo dzinofukidza nzvimbo dzekutandara makumi matatu nenomwe uye zvinokwezva zvine mutsindo, pamwe nemitambo makumi maviri neshanu yevaraidzo.
Kuvhura kwe Yese Beijing Resort yakanangana nezororo regore rino reMid-Autumn Festival iro rinotanga kubva munaGunyana 19 kusvika Nyamavhuvhu 21.
Kuvimba nenyika inozivikanwa yeIntellectual Properties seTransformers, Minions, Harry Potter uye Jurassic World, Universal Beijing Resort yakakwezva makumi ezviuru zvevashanyi panguva ye kuedza kwekuedza kutanga kwaGunyana.
Pakati penzvimbo nomwe dzemahotera, Kung Fu Panda Land yeAwesomeness, Transformers Metrobase uye WaterWorld zvakagadzirirwa vatashanyi veChinese.
“Kuvaka kwacho kwakatora makore maviri nehafu chete. Kushandiswa kwehunyanzvi hwekuChina hwemhando yepamusoro kwakapfupisa nguva yekuvaka, "akadaro Wang Tayi, maneja mukuru weBeijing International Resort Co., Ltd.
Kudzoka muma1990, Beijing yaiongorora kusimudzira kwakasiyana-siyana kweindasitiri yekushanya, nepo kambani yeUniversal Parks & Resorts ichitsvaga mikana yekupinda mumusika weChina.
Mukutanga kwegore ra2001, hurumende yemunharaunda yeBeijing nedivi reUS vakaita nhaurirano nezvekuvakwa kweiyo Universal Resort chirongwa muBeijing. Muna Gumiguru wegore iro, vakasaina tsamba yechinangwa chekushandira pamwe.
Mushure mekubvumidzwa kwechirongwa muna2014, Beijing International Resort Co, Ltd., mubatanidzwa weChina-US pamwe nemuridzi weiyo resort, yakavambwa muna Zvita 2017. Kuvakwa kweUniversal Beijing Resort kwakatanga zviri pamutemo muna Chikunguru 2018.
Sekureva kwaYang Lei, mutevedzeri wemukuru weDunhu reTongzhou reBeijing, mari yekuvaka yehotera iyi yakawedzera mari inopfuura mabhiriyoni makumi matatu nemashanu (madhora zviuru zvishanu nezviuru mazana mashanu).
Pakukwirira kwekuvakwa kweprojekti muna Chikunguru 2020, paive nevashandi vanosvika makumi matatu nemazana matatu vachimhanya vachipesana nenguva kuti vaone kuvakwa kwakanaka pakati pehosha yeCOVID-36,000.
Kuvakwa kwezvivakwa zvikuru zveUniversal Beijing Resort kwakapedzwa nenguva muna 2020. Nzvimbo yekutandarira yakatanga bvunzo dzekunetseka muna Chikumi 2021 ndokutanga kuedza kwekuedza munaGunyana 1 uye yakavhurwa zviri pamutemo kuruzhinji munaGunyana 20.